Intombazana inokuthiwa ngumntu ukususela kwiminyaka eyi-10 ukuya kwe-18. Ngeli thuba, umzimba utyunjwa, ukukhulelwa, ukukhula ngokukhawuleza kwazo zonke izitho kunye nokubunjwa komzimba. Ngeli xesha le ntombazana ikhula. Ngako oko, ukutya okunempilo kwabafundi abasemncinci kusemfuneko nje, ukuze umzimba ufumane amavithamini amaninzi njengoko kunokwenzeka kwaye uncedo kumzimba.
Impembelelo yokungondleki kwimizimba yeselula
Kufanele uqaphele ukuba udle. Ukutya kufanele kulungile, ngaphandle koko kunokukhokelela kwiziphumo ezimbi. Uninzi lwezikolo zifumana izifo ezingapheliyo, kwaye ezininzi zezi zifo zidibaniswa, okokuqala, ngokungondleki. Iintsholongwane zivame ukusebenzisa ukutya okukhawulezileyo, izikhwama, abaqhiki, i-chewing gum, iziphuzo ze-carbonate, - i-mastiffs njalonjalo.
Ngenxa yokutya okungalunganga, abantwana bafumana izifo ezahlukahlukeneyo, ubunzima obukhulu. Ngenxa yobunzima obuninzi, ukutya okuhlukileyo kusetyenziswa, okuyingozi kakhulu emzimbeni, ingakumbi ngexesha lokuhlaziywa komzimba. Ngethuba lexesha lomntu osemtsha uyatshintsha ngokukhawuleza kwaye ngokupheleleyo.
Isondlo esifanelekileyo kwintsha-mvana ibalulekile. Ekuphuhlisweni komntwana wobutsha, kukho izigaba ezintathu eziphambili:
ukususela kwiminyaka eyi-10 ukuya kwe-12;
ukususela ngo-13 ukuya ku-15;
ukususela kwiminyaka eyi-15-18;
Ubudala kwixesha elisusela kwiminyaka eyi-10 ukuya kwe-12, ngokuqhelekileyo imikhosi ebalulekileyo yomzimba womntwana ijoliswe ekukhuleni okukhawulezayo, oku kukhuthazwa yi-calcium. Ukungabi nekhalsiyumu kwenza umzimba ufumane uhlobo oluthile lwesifo. Umzekelo: i-scoliosis, kwaye nayo ingaba i-osteochondrosis. Ukuze uphephe oku, ekudleni kokutya kwakho kufuneka ukuba zibandakanya iimveliso zobisi. Isondlo sabantwana abaselula kufuneka sibe nobisi, ukhilimu omuncu, i-yogurt, kodwa ungalibali malunga neeprotheni zezilwanyana. Inyama iqulethekile. izinto ezinokubangela ukukhula komzimba.
Xa uneminyaka engama-12 ukuya kwe-15 kwiminyaka yomntwana osemtsha, ifomini ye-endocrine ifom, enokubangela intombazana yeselula. Kule minyaka kungcono ukuba ungadli ukutya equle amaninzi amanqatha, kodwa akufanelekile ukuyeka amanqatha.
Ukufikelela kwiminyaka eyi-18 umzimba womntwana osemtsha sele usele, kwaye ulungele ukuba ngumdala. Kule minyaka ubudala abafana abaselula bazama ukuzama ukutya: izidlo ezahlukileyo, ukutya okuvinjelwe ngokukodwa ukuba badle.
Kubantwana, ukutya kufuneka kukhethwe ngokuchanekileyo ngokuchanekileyo. Umzimba kufuneka unikezwe ngokupheleleyo ngeivithamini kunye nezixhobo eziyimfuneko. Qinisekisa ukuba ukutya kukubandakanya iziqhamo, i-citrus, iimveliso zobisi, inyama, imifuno, njl. Zama ukuphepha ukutya okunamafutha amaninzi, iswekile kunye netyuwa. Oku kuyingozi kumzimba. Khumbula ukuba umntwana osemtsha kufuneka adle amaxesha amane ngosuku.
Imenyu yokutya yabaselula kulula ukwenza. Into ephambili - ukugcina ukutya okufanelekileyo. Ukutya kwasekuseni, kukulungele ukutya kushushu, inyama kunye nokutya. Ingaba isaladi, isanti, isiphuzo secocoa, i-jelly, unako ukusela iintlobo ezahlukeneyo zemifuno. Kodwa akukho nhlobo ungasiphuzi ikhofi, ngakumbi ukususela ekuseni. Oku kukhankanywe ngokuthe ngqo.
Ukutya kwasemini kumzimba womntwana osemncinci, kufuneka nje udle izitya ezimbini, okufuneka ziqulethe yokuqala kunye nesibini. Okokuqala, kufuneka ukuba isobho eshushu okanye umhluzi, umhluzi, kwaye okwesibini kushushu. Kwakhona, kwidlo sasemini kucetyiswa ukuba udle iziqhamo ezithile. I-Porridge isidlo sasemini kungcono ukuba ungadli, esi sidiza siyifanele ngakumbi isidlo sakusihlwa. Kwakhona, ukutya kufuneka kube yi-snack. Uya kuba nako ukutshintsha iindawo zokutyiwa ezingenakulungele konke, kwaye okwesibini, umzimba uya kufumana amanzuzo amaninzi kunye nezixhobo ezisebenzayo kuwo. Ngomso emva kokuhlwa, ukutya okunokutya kufuneka kubandakanye i-buns, ii-cookies, njl njl, kunye nemveliso yobisi.
Zama ukwenza ukutya okulula. Ukuthwala isisu sabantwana ebusuku akufanelekile. Umzekelo, i-casserole, unako u-omelet, isaladi. Kulungile ukusela iglasi ye yogurt okanye ubisi.
Amaqela emveliso yabaselula
Ukuze uphuhliso olupheleleyo lomzimba, amaqela amaninzi ayahluka.
I-carbohydrates yintloko yababoneleli bamandla ngokukhula okusebenzayo komzimba. Ngokuqhelekileyo ziqulethwe kwiiyolimo.
Imveliso equkethe iprotheni. Ingaba yinyama yeentaka, intlanzi, naziphi na izilwanyana. Inyama iqukethe isinyithi, ngokusilela kwintsholongwane yomntwana.
Iifiber - imifuno, izithelo zegrrusi. Kubalulekile ukuba umntwana usemva ukuba ahlambulule umzimba weexin.
Umzimba udinga i-oyile yemifuno (iinqutyana, imbewu,). Xa usebenzisa le mveliso, unokuphepha iingxaki ezifana nokulahleka kweenwele, ukuguqulwa kunye nokusabalalisa kwezipikili. Iingxaki ezinjalo zixhaphake kakhulu ebusheni.
Ubisi kunye nemveliso yobisi, oku kunika umzimba umzimba ngamavithamini, calcium, phosphorus.
Ngomzimba, amanzi okusela ayiluncedo kakhulu, acocekileyo. Ukuze umzimba usebenze ngokufanelekileyo, usuku kufuneka lisele okungenani ii-2 ilitha. Konke kuxhomekeke kubukhulu bomzimba wakho.
Ukuba ulutsha lu landela ezi ngcebiso, aziyi kuba neengxaki zempilo, uphuhliso lomzimba luya kuhamba kakuhle. Kule minyaka, abantu kufuneka bafunde ukutya okulungileyo kunye nokutya, kungenjalo kuya kuba nzima kakhulu ukushiya izikhonkco zabo.
Iintlobo zeziqhamo ezisanda kufakwa
Izibonelelo kunye nokulimala kweeshizi: ngaba kukufanelekile ukuba udle?
I-recipe ye-lemonade kwi-lemons
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo kwi-hepatitis C
Oko kufuneka ukwazi umfazi ukuze ungamthathi umyeni wakhe
IMvana phezu kwethambo kunye neetamatati kunye newayini
Ixesha lokuhamba emva: Iimpawu zokuziphatha, ucoceko, ukutya okunomsoco
Ndingathini ukuba ube "ngumama"?
Isidlo sikaMelanie Griffith
Emma Watson: i-Biography
Umyeni wokuqala kaTatyana Navka akayi kumtshato wakhe